Ethereum Foundation announced the recipients of the "first wave of grants" pamusoro $ 2.5 miriyoni - Tray News - Blockchain News
Ethereum Foundation akazivisa vanowana ari “sefungu dzorubatsiro okutanga” pamusoro $ 2.5 miriyoni
Sezvinotaurwa chepamutemo Ethereum Foundation Blog, gumi nenhatu zvirongwa vakagamuchira anokwana $ 2.565 mamiriyoni nokuti Zviitiko zvine chokuita scalability, chibatiso, mushandisi inowanikwa kukura uye dzimwe enhancements kuna Ethereum blockchain hurongwa.
The Ethereum Foundation anoti kuti anopa ruchatibatsira kuvandudza vakachenjera zvibvumirano uye decentralized kushanda pamusoro Ethereum papuratifomu. Vakomana nechimwe mugashiri, nyaya pakutsvakurudza ake uye chitsama ngaape zvinoratidzwa:
“Tinovimba kuti anopa izvi icharatidza munzanga chii, kwedu mafungiro, haana mararamiro, uye anoda zvakawanda rutsigiro,” Said Ethereum Foundation nenhengo funga basa ravo ” kudzivisa dambudziko munharaunda. ”
Chikwata anoti pfungwa yacho mari chirongwa yakazivisa muna January zvakachinja kubvira kugadzirisa scalability nyaya: “We kuwedzera rutsigiro zvirongwa zviri kuita chaizvo basa kuwedzera scalability, inobatsira uye vakachengeteka. zvirongwa izvi regai kuitisa tokensales, asi kufunga pamusoro pokumuka anobatsira zvigadzirwa”.
Grants hadzina akasungwa zvakasimba kuti mipiro pamusoro Ethereum blockchain: nheyo rinopawo kutsigira nhengo avo munharaunda vari kuita “chinobatsira divi muzvirongwa”. Zvikuru sei, $ 1.5 miriyoni vakaenda pakutsvakurudza chirongwa L4 Research, iyo anovandudza mamiriro migero, uye $ 100,000 kuna Prysmatic Labs chirongwa, iyo inotaura scalability kuburikidza sharding – mutoro nokugoverana pakati nodes.
Previous Post:Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 3
Next Post:Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 4
Kurume 26, 2018 pa 6:01 AM
Kubvumbi 10, 2018 pa 3:44 AM
Hae Redbird anoti:
Gumiguru 21, 2018 pa 7:36 PM